Ny Youtube dia hamela ny mpampiasa hijery horonantsary tsy misy fifandraisana Internet | Vaovao IPhone
Vao tsy ela akory izay dia namoaka fampiharana ofisialy ho an'ny iPad ny YouTube. Taorian'ny fifandirana tamin'i Apple momba ny fijanonana na tsia amin'ny iOS ho fampiharana natiora dia nanapa-kevitra ny handefa fampiharana ofisialy ho an'ny iDevices rehetra ahafahan'ny mpampiasa mankafy ny horonan-tsary rehetra azo jerena ao amin'ny tambajotra sosialy miaraka amin'ny fidirana Internet. Ny fanavaozana farany dia nanatsara be ny traikefan'ny mpampiasa miaraka amina endri-javatra vaovao sy mahomby izay manampy ny mpampiasa hijery horonantsary raha mitady iray hafa hijerena azy any aoriana.
Minitra vitsy lasa izay dia nahalala ny vaovao isika: Ny Youtube dia hamela ny mpampiasa hijery horonan-tsary ivelan'ny Internet miaraka amin'ilay fampiharana amin'ny finday. Araka ny voalaza tao amin'ny bilaogy ofisialin'ny tambajotra sosialy, ny fitaovana dia havoaka amin'ny Novambra amin'ity taona ity ary ho azon'ireo mpampiasa mampiasa ny fampiharana ofisialy amin'ny rafitra fiasa samihafa. Tsy nanome fanazavana bebe kokoa noho ny manaraka izy ireo apetraho ao amin'ny bilaoginy ofisialy:
Izahay dia mijery hatrany ny fomba hitondrana mpijery bebe kokoa amin'ny atiny. Ao anatin'ity ezaka ity, amin'ny faran'ity taona ity dia handefa endrika vaovao ho an'ny rindranasa finday YouTube ianao izay hanampy anao hahatratra ireo mpankafy - na dia tsy mifandray amin'ny Internet aza izy ireo.
Ity fisehoana ho avy ity dia ahafahan'ny olona manampy video amin'ny fitaovany hijerena mandritra ny fotoana fohy rehefa tsy misy fifandraisana Internet. Noho izany ny fahafahan'ireo mpankafy anao mankafy ny horonan-tsarinao dia tsy tokony hotapahina amin'ny zavatra tsy misy dikany toy ny dia maraina.
Ity dia ampahany amin'ny fanavaozam-baovao ataonay izay manome fotoana bebe kokoa amin'ny olona hankafy ny horonan-tsary sy fantsona YouTube finday. Zahao ny bilaogy YouTube rehefa hanomboka amin'ny Novambra, raha mila tsipiriany misimisy momba ny fomba fiasan'izy io.
Ny ekipa YouTube
YouTube dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika
Ary, araka ny nolazaiko anao tamin'ilay lohateny izay etsy ambony ihany, ny YouTube dia tsy mijanona amin'ny fampisehoana fiasa vaovao ho an'ny tontolo iainana iray manontolo. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanavao ny fampiharana azy ho an'ny iOS izay mamela anao hametraka horonan-tsary eo amin'ny efijery kely eo amin'ny farany ambany havanana hikarohana fantsona na horonan-tsary maro kokoa hijerena azy avy eo.
Tsy dia nanome fanazavana firy momba ny fiasa vaovao haseho amin'ny volana novambra izy ireo. Naneho hevitra fotsiny izy ireo fa ho hita amin'ny finday rehetra. Heveriko fa bokotra iray milaza hoe: «Jereo ivelan'ny Internet», ampidino amin'ny fitaovanao izany ary rehefa vitanao ny mijery azy dia hamafa ny tenany amin'ny iPad anao (amin'ity tranga ity).
Inona ny hevitrao? Ahoana no fahitanao ny seho?
Fanazavana fanampiny - Havaozina tanteraka ny Youtube miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny Youtube dia hamela ny mpampiasa hijery horonan-tsary tsy misy fifandraisana Internet
MyFitnessPal, fampiharana tonga lafatra hanisana ny kaloria nohaninao
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 7 mifanaraka amin'ny fitaovako?